တလောကလုံး သိနေပြီးတာတောင် ဇွတ်ငြင်းနေသေး၊ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ KIA/O ကိုပဲ အပြစ်ပုံချနေမြဲ၊
လက်ကိုင်တုတ် သတင်းစာ အသုံးချပြီး ဗမာတိုင်းရင်းသား နဲ့ ကျန်တိုင်းရင်းသားများကို သွေးခွဲ၊ ဒါကြောင့် ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေ ဗမာ မုန်းတီးမှု ဖြစ်နေတာကို နားလည်ပေးသင့်တယ်၊ ဘယ်တော့မှလဲ မရှက်တတ်တဲ့ စစ်အစိုးရလက်ကျန်၊
သေနတ်တွေမကိုင်ထားရင်တော့ထိုးစစ်ဆိုတာဆင်ဖို့မလိုပါဘူး..သေနတ်တွေကတိုက်ဖို့ပဲလေ..အဲ့ဒီတော့ကို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တော့ ထိုးစစ်ဆင်ရမှာပဲ..အဲ့လိုမလုပ်စေချင်ရင် လက်နက်စွန့် ထာဝရညိမ်းချမ်းရေးယူပေါ့..
ဒေါ်ဒွဲဘူ ပြောကြားချက် သွေးထွက်အောင်မှန်ပါသည်။
လိုဇာ ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်ပါ။
What exactly right is disappearance of KIA/O. KIA/O disappear now , peace will be set up now automatically.
Jan 29, 2013 08:02 AM